Sidee loo yareeyaa calaamadaha fiditaanka naasaha? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • beauty • Daawooyinka dabiiciga ah • daryeelka Sidee loo yareeyaa calaamadaha fiditaanka naasaha?
Sidee loo yareeyaa calaamadaha fiditaanka naasaha?
Eliseo Emma Kamgang 6 March 2019
Naasku waa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan ee jirka. Waxay ka qayb qaadataa quruxda iyo aqoonsiga dhedig ahaan adigoo kalsooni isku siinaya. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale yihiin kuwo xasaasi ah oo ay saameeyeen dhibaatooyinka qaarkood sida calaamadaha caanka ah ee buluuga ah ama xargaha midabka leh ee koraya iyaga.
Calaamadeynta calaamadaha naaska: sababaha
Waxyaabo dhowr ah ayaa ka masuul ah muuqaalka calaamadaha kala-soocidda ee naasaha:
La qaangaadhnimada: gabdhaha yaryar (sababtoo ah isbedelka hoormoonka iyo koritaanka degdegga ah ee naasaha);
Fog of la'aanta;
Kadib kororka mugga naaska;
Waxyaabaha la iska reebo (haddii haween kale oo qoyskaaga ah ay u egtahay in loo calaamadeeyay sidan);
Khasaare ama miisaanka oo degdega ah (sidoo kale waxaa sabab u ah fidinta maqaarka).
Ukunta cad waa mid aad u taajir ah oo ku jirta fitamiin A, borotiinka iyo kolajka, kuwaas oo wada shaqeynaya hagaajinta iyo bogsashada maqaarka. Bakteeriyada ku jirta ukunta cad waxay caawin kartaa dib u soo celinta maqaarka inta uu kollajirku ka caawinayo inuu yareeyo muuqaalka calaamadaha fidsanaanta. Sida fitamiin A, waa wax aad u fiican in lagu dhiirrigeliyo maqaarka maqaarka. Intaa waxaa dheer, ukunta cad oo sidoo kale qani ku ah amino acids taasoo soo celisa muuqaalka dhallinyarada iyo muuqaalka muuqaalka ah ee maqaarka.
garaaci ukunta cadaan ilaa ay ka noqoto cawlaan. Isticmaal suufka suufka ah, ku calaamadee ukumaha cad cad calaamadahaaga. Ku dhaq aagga ay aafeeyeen adiga oo isticmaalaya biyo shan iyo toban daqiiqo kaddibna qalal. Isticmaal daawadan laba jeer toddobaadkii.
Isku qas laba xabbo ukun ilaa ay noqdaan kuwo cufan. Kadibna ku dar saliida saytuunka leh qaacidada iyo si fiican u walaaq.
Bilaw inaad isku darsamid isku dhafka meelaha aad dhibaatooyinka ku haysatid intaad si tartiib ah u soo baxayso
Taas ka dib, maydh aagga daweynta si fiican toban daqiiqo kadib.
Si joogto ah u samee habka si loo yareeyo calaamadaha dhejiska.
Aloe Vera waxaa ku jira antioxidants kuwaas oo kicin kara wax soo saarka maqaarka ee maqaarkaaga, kaas oo hagaajiya ciladkiisa.
Dhammaan wixii aad sameyso si aad u diyaariso daaweyntan waa in lagu daro laba qaado oo saliid saytuun ah oo leh weel aloe Vera gel ka dibna ku darso isku dhafan meelaha ay dhibaatadu saameysey habeen walba ka hor sariirta.
Ku darso shaaha saliidda vitamin E saarista calaamadaha fidsan ee naasahaaga.
Miisaanka loogu talagalay 15 daqiiqado 20 si saliidda loo nuugo si sax ah.
Ku dhaji daaweyntan maalin walba si aad uga takhalustid calaamadaha fiditaanka naasaha.
Casiirka liinta waa il heer sare ah oo fiitamiin C ah, taas oo u dhaqma sidii qalabka wax lagu nadiifiyo isla markaana si deg deg ah u yareyso calaamadaha fidinta.
Si aad u diyaariso daaweyntan, waxaad u baahan tahay qaado oo liin ah, liinta saliida qumbaha, caag balaastig ah iyo shukumaan kulul.
Ku dar qaado miro liin ah si aad u qaado miisaanka saliida qumbaha.
Si fiican u qas, si aad u hesho dareer saafi ah.
Ku shub dareerahaan calaamadaha fidsan ee laabta.
Goobta ku dabool bacda caag ah oo ku rid shukumaan kulul oo loogu talagalay daqiiqado 30.
Ka saar bustaha oo tirtir saliid xad-dhaaf ah si aad uga hortagto dharkaaga dharkaaga.
Codso isku darka intaadan sariirta tegin maalin kasta si aad uhesho calaamadda fidsan ee naasaha.
Casiirka liinta iyo glycerin
Si loo yareeyo muuqaalka calaamadaha fidsan ee xabadka, qaado qaado qaado liin iyo ku dar qasac ½ qaado glycerin. Si tartiib ah ugu daadi meelaha u nugul. Ku celceli nidaamkan maalin kasta ilaa aad hesho natiijooyinka la rabo.
Lo'da Cocoa waa mid ka mid ah habka ugu fiican ee guriga loogu daaweeyo calaamadaha fidinta naasaha. Maqaarka maqaarka leh subaga qudaarta cagaarka ah waxay kor u qaadaa wax soo saarka kollimada iyo hagaajinta socodka dhiigga ee maqaarka, kaas oo hagaajiya cufnaanta, taas oo yareyneysa calaamadaha fidinta.
Waxaa laga soo xigtey: https://justefemmes.com/vergetures-seins/
Talooyinka 7 ee Ka hortagga Maskaxda - Ka Hagaajinta Caafimaadkaaga
La soco dheefaha 6 iyo Guryaha Jelly Royal - Hagaajinta Caafimaadkaaga